လီဗာပူးအသင်း အနေဖြင့် ချန်ပီယံ ဆုဖလားများ ရယူရမည့် အချိန် ကျရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နည်း?? - Yangon Media Group
လီဗာပူးအသင်း အနေဖြင့် ချန်ပီယံ ဆုဖလားများ ရယူရမည့် အချိန် ကျရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နည်း??
လက်ရှိနွေရာသီ ကစားသမားအပြောင်း အရွှေ့ဈေးကွက်တွင် ထိပ်တန်းကစားသမား အချို့အား ငွေကြေးများစွာ အသုံးပြု ခေါ်ယူထားသည့် လီဗာပူးအသင်း၏နည်းပြ ဂျာ ဂင်ကလော့ပ်က အသင်းအနေဖြင့် ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို စိန်ခေါ်နိုင်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်အားပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ချန်ပီယံဆုဖလားများ ရယူရမည့်အချိန်လည်း ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြော ကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွင် ရိုးမားဂိုးသမား အယ်လီဆန်၊ လိုက်ပ် ဇစ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ကီတာ၊ မိုနာကို နောက်တန်းကစားသမား ဖာဘင်ဟို၊ စတုတ်စီးတီး တောင်ပံကစားသမား ရှာကွီရီတို့အား ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားခဲ့ပြီး အသုံးစရိတ် ပေါင် ၁၅၇ သန်းအထိ အသုံးပြုထားနိုင်ခဲ့ခြင်းများ ကြောင့် နည်းပြကလော့ပ်က ယခုကဲ့သို့ ကြုံးဝါးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
”အသင်းကို စရောက်ခဲ့ကတည်းက ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူအားဖြည့်မှုနဲ့အတူ အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကံတရားအရ အောင်ပွဲမခံနိုင်ခဲ့တာ အားလုံးအမြင်ပါပဲ။ လိုအပ်ချက်အချို့ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံလိုပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ ချန်ပီယံဆုဖလားတွေ ရယူရမယ့်အချိန် ကျရောက်လာပြီဆိုတာပါ ပဲ”ဟု နည်းပြဂျာဂင်ကလော့ပ်က ဆိုသည်။
လီဗာပူးအသင်းအား ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘောလုံးရာသီတွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့သည့် နည်းပြဂျာဂင်ကလော့ပ်သည့် ကစားသမားသစ်များ ခေါ်ယူမှုတွင် စံချိန်တင်အသုံးပြု မှုများရှိခဲ့ပြီး သုံးနှစ်တာကာလတွင် လိဂ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ၊ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ပြီးခဲ့သည့် ရာသီတွင် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ အဆင့်အထိ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင် ပေးထားနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်မှုရရှိထားသည့် နည်းပြအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိနေခဲ့သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကွန်ဂရက်ပါတီက ရာဟူးလ်ဂန္ဓီ အား ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်??
အသက် ခြောက်လ မတိုင်မီအထိ ကလေးများအား မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးခြင်းသာမက အားဖြည့်အစာများ ကျွေးေ??
အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် ကျောင်းအပ် လက်ခံရာ၌ နယ်မြေကျော်လွန် လက်ခံမှုများကို အရေးယူမည်
ထိုင်းမှ မြဝတီ လမ်းကြောင်းဖြင့် သင်္ကြန်နေရပ်ပြန်မြန်မာ နှစ်ရက်အတွင်း တစ်သောင်းကျော်ရှိ
ဟာသ အက်ရှင်ဇာတ်ကား Muscle ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်မည့် ဗင်ဒီဇယ်
ရေနံချောင်းမြို့နယ်နှင့် ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ လေဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုများကို ထောက်ပံ့ငွေ
မိုင်းဆတ်မြို့၌ ရေကြီးရေလျှံ၊ လူနေအိမ်နှင့်လယ်မြေများ ရေနစ်မြုပ်